Xukuumadda Somaliland Oo Samaynaysa Goobo Lagu Xanaaneeyo Duur-joogta + SAWIRO DUUR-JOOGTA SL. |
Xukuumadda Somaliland Oo Samaynaysa Goobo Lagu Xanaaneeyo Duur-joogta + SAWIRO DUUR-JOOGTA SL.
Hargaysa (GNN)- Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare, ayaa ka warbixisay waxqabadka wasaaradaasi mudadda shanta sanadood ah ee ay taladda dalka haysay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo.
Sidoo kale, wasiir Shugri waxay faahfaahin ka bixisay waxyaabaha u qorshaysan wasaaradda deegaanku ee ay doonayaan inay hirgeliyaan mustaqbalka dhaw iyo qorshaha fog.
Marwo Shugri Baandare, waxay sidaasi ku sheegtay waraysi ay shalay xafiiskeeda kula yeesheen weriyeyaal ka kala socday qaybaha wasaaradda warfaafinta ee TV-ga, Idaacadda Radio Hargaysa iyo wargeyska DAWAN. Waxaana Wasiirka shir saxaafadeedkaasi ku wehelinayay wasiir ku xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga.
Iyadoo ay shalay si rasmi ah u bilaabeen warbaahinta dawladu baahinta barnaamij ku saabsan in mas’uuliyiinta wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee dawladu ay ka warbixiyaan waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha u qorshaysan inay hirgeliyaan.
barnaamijkaasi oo sida la qorsheeyay ay si maalinle ah u baahin doonaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta dawladu inta ka horaysa xuska munaasibadda 18 May, kaasi oo qayb ka ah dabaal-dega 24-guradda ka soo wareegtay gooni-isku taaga Somaliland.
Wasiirka deegaanka oo ka warbixinaysay waxyaabaha ugu muhiimsan ee u qabsoomay waxa ay tidhi “Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu heer kala duwan ayay soo martay, laakiin maanta waa mid u soo jeeda wixii loo igmaday oo ah ilaalinta deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. wax badan ayaana iska bedelay intii xukuumadani gacanta ku haysay siiba intii aan imid anigu, waxaanan isku tacalujiyay in aanu ogaano waxa qabyadda ah iyo waxa u hirgalay.
Markaa wixii qabyadda ahaa ayaan isku tacalujinay in aan wax ka qabano, taasi oo ay ugu horayso in xaalufkan soconaya ee dhirta la gubayo sidii loo joojin lahaa. Waxaa se taala wixii lagu bedelayay oo anaga oo keliya maahee, hoos imanaysa dhawr wasaaradood oo aanu isku xidhanahay.
Taasi ayaanan aad u dar-dargelinay sidii aanu wasaaradaha wada shaqayntu naga dhaxayso mid waliba halkii ay kaga haboonayd ayaan dardar gelinay, waxaananu xoog saarnay, wixii lagu bedeli lahaa dhuxusha. Waxaananu ku wargelinay ganacsatadda keena wixii lagu bedeli lahaa dhirtan la gubayo.
Waxaanu ka hawlgalnay xukuumad ahaan in wixii lagu bedelayo dhuxusha ee tamar ah cashuurta laga daayo, taana waan ku guulaysanay. waxaanay taasi ku tusaysaa in ay naga go’an tahay ka xukuumad ahaan in is-bedelkaasi uu dhaco.
Waxa kale oo ay wasiirku sheegtay in ay marar badan bulshadda u soo bandhigeen qiimaha deegaanka iyo khayraadka dabiicigu leeyahay. “Waxa kale oo aanu samaynay in aanu xooga saarno, oo aanu gudbino qiimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ahi leeyahay, haddii ay baaba’aan inay adag tahay sida looga soo kabtaa. Haddii se la isku dayo in la soo kabto, oo halkaas khasaaraheeda lagu joojiyo dhuxusha, oo wax midho dhala ay noqdaan”.
Dhinaca kale Wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Axmed Maxamed Nuur, ayaa isna waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee u hirgalay, waxaanu sheegay in madaxweyne Siilaanyo uu gacan ka gaystay sidii ay wasaaradda deegaanka ula shaqayn lahaayeen hay’aduhu si ay hesho dhaqaale ay wax kaga qabato dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanka haysta.
waxaanu yidhi “Madaxweynuhu gacan weyn ayuu ka gaystay sidii wasaaradda loo soo kicin lahaa, waxaanu soo saaray Digrootooyin uu ku kaabayo wasaaradda, oo uu ku soo xidhayo hay’adaha si ay ula shaqeeyaan. waayo deegaanku waxa uu ka mid yahay tiirarka nolosha.
Tallaabooyinka u qorshaysan wasaaradda waxa ka mid ah in goboladda dalka oo dhan dhismayaal ayaa ka socda, waxa kale oo noo qorshaysan in xayawaankii duurjoogta ah sidii loo ururin lahaa, oo waxa jirta duurjoog ku xaraysan meelo aan munaasib ku ahayn, oo gacanta ay iskaga haystaan dad gaar ahi. Waxaana laga sameeyay lixda gobol xarumo waaweyn, waxaana dalka yimid oo aanu kulamo la yeelanay nin Talyaani ah, oo sameeyay meesha ugu weyn ee Tansania ee lagu daawaddo xayawaanka, haddii aanu goboladda xarumo uga samayno xayawaanka waxa inaga soo gelaya dakhli faro badan”.
Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Maxamed Cilmi Xuseen, ayaa isna ka warbixiyay xarumo shaqeeya oo wasaaraddu ku leedahay goboladda dalka. waxaanu tilmaamay in sanadka 2016 ay u qorshaysan tahay sidii loo baa’biin lahaa dhulka la iska Ootay.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Wasaaraddu lixda gobol xarumo ayay ku leedahay waxana gacanta lagu hayaa oo la dhisayaa, waxna way dhisan yihiin, wasaaradda sanadkan waxa u qorshaysan la dagaalanka xaalufka iyo xidhashadda seeraha ee dadku iska xidhaan.
Mashruucan waxa nagala shaqaynaya World Bank, SDF iyo hay’addo kale way nagala shaqaynayaan, waxaanan qabnaa in mustaqbalka dhaw aynu heli doono mashaariic wax ka tari doona deegaanka ayaanu qabnaa.